नेपाल आज | कस्तो छ छविसपाथिभेरा गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार चलाउनेको भिजन? (भिडियोसहित)
समाचार भिडियो Breaking News
राजनिति समाज सेवा हो, पदको औचित्य पुष्टि गर्छुः चलाउने
नेकपा माओवादी केन्द्रले छविसपाथिभेरा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि बसन्त बहादुर चलाउनेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चलाउनेलाई माओवादी केन्द्रले त्रिदलिय गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रुपमा सर्वसम्मत घोषणा गरेको छ ।
पालिका बाँडफाडको क्रममा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पाएको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका अध्यक्षमा चलाउने सिफारिस गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सदस्य रामचन्द्र रोकायाले जानकारी दिए ।
बझाङमा सत्तारुढ दलहरुबीच चुनावी गठबन्धन हुँदा माओवादी केन्द्रले छविस पाथिभेरा गाउँपालिका र दुर्गाथली गाउँपालिकामा प्रमुख र ४ वटा गाउँपालिकामा उपप्रमुख पाएको छ । छविसपाभिभेरा गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि चलाउनेलाई उठाउने निर्णय भएको नेता रोकायाले बताए । रोकाया भन्छन्, 'दुर्गाथली गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका नेता दिलबहादुर थापालाई अध्यक्षमा उठाउने सहमती भएको तर घोषणा हुनबाँकी छ । माओवादी केन्द्रले चारवटा उपप्रमुखमा कसलाई उठाउने भनेर छलफल गरिरहेको छ ।'
को हुन् अध्यक्षमा सिफारिस भएका चलाउने?
माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा मनोनित भएका चलाउने छविसपाथिभेराका ०६ स्थायी बासिन्दा हुन् । समाजशास्त्रबाट स्नाकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका चलाउने जनसमुदायमा लोकप्रिय व्यक्ति हुन् । गत फागुनमा नेपाल आजसँगको अन्र्तवार्तामा उनले निरन्तर १८ वर्षदेखि पार्टीको कार्यकर्ता भएर कामगरिरहेको बताएका थिए ।
छविसपाथिभेरा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र एकिकृत समाजवादीको गठबन्धनमा साझा उम्मेदवार रहेका चलाउनेले भारी मतका साथ चुनाव जित्ने विश्वास कार्यकर्ताले गरेकाछन् । नेपाली काँग्रेस छविसपाथिभेरा गाउँपालिका सभापती पाण्डव थापाले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन आफु पुर्ण रुपमा लागि पर्ने बताएकाछन् ।
राजनितिलाई समाज सेवा हो भन्ने धारणा राख्ने चलाउनेले छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाए पदको औचित्य पुष्टि गर्छु भनेका थिए ।
नेपाल आजले गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार चलाउनेसँग चुनावकेद्रित विषयमा गरेको अन्र्तर्वाता यस्तो छ:
बसन्त चलाउने छविसपाथिभेरा गाउँपालिका